Ubuhlakani kwishishini, yintoni, ziNzuzo kunye nokungancedi
Buyintoni ubuhlakani beshishini kwaye ziziphi izibonelelo kunye nokungalunganga? Ubambiswano lukhona xa kukho umnini weshishini ongaphezulu kwesinye, kwaye elo shishini alifakwanga okanye aliququzeleli njengenkampani enamatyala athile. Amaqabane abelana ngenzuzo, ilahleko, kunye namatyala. Amaqabane angangabantu ngabanye, amashishini, iitrasti, obunye ubuhlakani, okanye nayiphi na indibaniselwano yale mizekelo. Enye yezona ngxaki zinkulu kukuba abanini banoxanduva olungenamda kuwo onke amatyala asemthethweni kunye noxanduva lwenkampani. Ukongeza, iqabane ngalinye lisebenza njengommeli, kwaye ngenxa yoko, linokuzibophelela kwinkampani kwizibophelelo ngaphandle kwemvume yamanye amaqabane. Uxanduva olubangelwa liqabane elinye lishiya omabini amaqabane asesichengeni sokumangalelwa. Izibonelelo zerhafu azibalulekanga njengakwinkampani. Ingeniso yeshishini kunye nelahleko zixeliwe kwirhafu yabanini.
Ubambiswano luhlala lusetyenziswa xa abanini babini okanye nangaphezulu befuna ukuthatha inxaxheba kwimisebenzi yemihla ngemihla yeshishini. Ubambiswano luqala kwakamsinya nje ukuba kuqalwe umsebenzi weshishini nomnye umntu, enamaphepha okanye angazaliswanga. Nokuba umthetho awuyifuni loo nto, uninzi lwamaqabane enza isivumelwano esibhaliweyo sokusebenzisana ukubonisa indlela abaza kulawula ngayo ishishini. Esi sivumelwano kufuneka sichaze nokuba iza kuhanjiswa njani inzuzo kunye nelahleko. Ukuba isivumelwano esibhaliweyo asenziwanga, ke imithetho yobambiswano yelizwe iya kulawula ubuhlakani. Ukwenza isivumelwano kuya kuvumela amaqabane ithuba lokuchaza ngokucacileyo okulindelweyo omnye komnye.
Intsebenziswano ivumela ukuba inzuzo kunye nelahleko yeshishini ixelwe kwirhafu nganye yomnini ngamnye. Amandla omntu ngamnye kwiqabane ngalinye anokubekwa kwindawo efanelekileyo yokuphatha kunye nezezimali. Ubambiswano kulula ukuseka. Okwangoku amaqela amabini nangaphezulu aqala ukwenza ishishini, ubuhlakani buqala. Kukho ubuncinci bamaphepha kunye neemfuno zomthetho ezifunekayo ukuqala ubuhlakani. Uninzi lwamazwe lukhuthaza isivumelwano sobambiswano ukuba siyilwe, kwaye kufunyenwe iilayisensi zeshishini kunye nezatifikethi.
Ngokulula kulula ukuseka
Iitalente kunye namandla eqabane ngalinye anokusetyenziswa kakuhle
Amaphepha amancinci kunye nezithintelo zomthetho
Izinto ezingalunganga zokusebenzisana
Ngokungafaniyo nenkampani okanye inkampani enamatyala athile, abanini bobambiswano banamatyala angenamda. Oku kuthetha ukuba ukuba ishishini limangalelwa, ababolekisi bangalandela nayiphi na ipropathi yobuqu kunye neeasethi ukwanelisa amatyala. Kukho umba wokuba umnini ngamnye asebenze njengearhente yenkampani. Njengearhente yenkampani, iqabane ngalinye linokuzisa uxanduva. Ukuba ingozi yenzekile neqabane elinye ngexesha lokuqhuba ishishini, onke amaqabane anoxanduva ngokulinganayo. Oku kuluncedo olukhulu xa kuthelekiswa nequmrhu. Oku kuthetha ukuba xa ishishini limangalelwa, nokuba leliphi na iqabane elidale uxanduva, omabini okanye onke amaqabane anokulahlekelwa likhaya, iimoto, ukonga kunye nezinye izinto. Iiarhente zenkampani zikwanakho ukungena kwizivumelwano zomthetho kunye nezibophelelo ngaphandle kokufumana imvume kwamanye amaqabane. Kwimeko apho isivumelwano esibhaliweyo singakhange senziwe, ubuhlakani buya kuyeka ukubakho.
Amaqabane anetyala elingenamda malunga namatyala kunye namatyala eshishini
Iqabane elinye linokubangela ukuba onke amaqabane asokole ukulahleka kweshishini kunye neeasethi zobuqu
Ngaphandle kokucwangciswa kwangaphambili, inkampani iphelisiwe kukusweleka kweqabane
Isigqibo esenziwe liqabane elinye okanye ngaphandle kwemvume evela kwamanye amaqabane sinokulinyanzela ishishini.
Amandla asikelwe umda okunyusa imali
Ama-85% obambiswano lweshishini aqhekeka kunyaka wokuqala
Ubambiswano lufana nemodeli yodwa yeshishini. Ubambiswano ngokuyintloko kukuphela kobunini obunini kunye nomnini ongaphezulu komnye. Zombini zihamba ngokurhafisa, kunye nommiselo omiselweyo kunye novavanyo. Zombini kulula ukuqala, kwaye ziphele. Ukuphela kobunini bobambiswano kunye nentsebenziswano ikwabelana ngokwahluka okuthandabuzekayo kokuvumela uxanduva olungenamda kumatyala kunye noxanduva lwenkampani. Zombini ezi ntlobo zeshishini zinobungakanani bexesha. Bobabini babelana ngobunzima obufumanekayo ekuzameni ukunyusa imali. Isilumkiso esikhulu kufuneka sisetyenziswe kuba ukumangalelwa ngokubambisana kungakhokelela ekuthinjweni kweeasethi zangoku nezexesha elizayo. Imibutho kunye neenkampani ezinamatyala athile, kwelinye icala, zinamalungiselelo asemthethweni okukhusela abanini kwizimangalo zeshishini.
Ukuhlaziywa kokugqibela ngoDisemba 27, 2017